रामचन्द्र पौडेलको प्रश्नः तातोपानीमा सँगै पौडी खेल्दैमा एकता हुन्छ? - Everest Dainik - News from Nepal
रामचन्द्र पौडेलको प्रश्नः तातोपानीमा सँगै पौडी खेल्दैमा एकता हुन्छ?
कास्की, फागुन २६ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तातोपानी कुण्डमा पार्टी सभापतिसँगै नुहाउँदैमा पार्टी एकता नहुने बताएका छन् । पोखरामा आज प्रेस युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले भावना र एजेण्डामा भएको एकता मात्र सार्थक हुने बताए ।
पार्टी सभापति देउवासँगै शनिबार म्याग्दीको तातोपानीमा पौडेलले नुहाएका थिए । ‘हामी एक भयौं भन्दैमा एकता हुने होइन,’ उनले भने, ‘भावनात्मक रुपमा एक हुनुपर्छ ।’ तोतोपानीमा सँगै पौडी खेल्दैमा एकता भयो भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘तातोपानीमा सँगै पौडी खेल्दैमा एकता हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड पुगेपछि तातोपानी कुण्डमा पर्यटक ह्वात्तै बढे
ट्याग्स: deuba-Paudel, Tatopanee kunda